Maareeyaha Dekedaha Somaliland Siciid Xasan Oo Ka Warbixiyay Safar Shaqo Oo Uu Ku Joogo Cariga Biritain Gaar Ahaana Birmingham | Berberanews.com
Home WARARKA Maareeyaha Dekedaha Somaliland Siciid Xasan Oo Ka Warbixiyay Safar Shaqo Oo Uu...
Maareeyaha Dekedaha Somaliland Siciid Xasan Oo Ka Warbixiyay Safar Shaqo Oo Uu Ku Joogo Cariga Biritain Gaar Ahaana Birmingham
Birmingham (Berberanews) 10.03.2019 Mareeyaha Dakadaha Somaliland Mudane. Siciid Xasan Cabdillahi oo ka soo qayb galay Munaasibad soo dhaweyn ah oo ka qabsoontay Magaalada Birmingham ee cariga ingiriiska Uk, markay tariikhdu ahayd 07/03/2019
Munaasibadaas oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan Magaladda Birmingham, Iyagoo isugu jira Madax dhaqameed, Haween iyo dhalinyaro.
Waxana halkaa hadalo soo dhawn ah ka soo jeediyay odayaal ku hadlayay magaca jaaliyadda Somaliland ee Magaalada Birmingham,xusayna inay tahay jaaliyad isku duuban oo si wada jira u soo dhaweeya,
Madaxda Dawladda iyo Madaxda Xisbiyada Qaranka Somaliland.
Waxana ugu horayn halkaa ka hadlay Oday Farax Mohamed Bakayle,Aqoonyahan Omar Nur, Ambassador Meecaad,Oday Axmed Sheikh, iyo Caaqil Cabdi
Waxana isla madashaas hadalo koobkooban ka soo jeediyey Gudoomiyaha Xisbal Xaakimka Kulmiye Mud. Maxamuud Hersi Dudu, Xoghaye Asad iyo Marwo Ayaan Jannaale.
Gebagebadii Manaasidaba waxaa hadalkii la wareegay Maareeyaha Dakadaha Somaliland Mud.Saciid Xasan Abdillahi oo uga waramay xaalada Dalka halkuu marayo iyo isbedalka iyo horumarka la taaban karo ee ka qabsoomay Dekedda Berbera iyo shirkadda gacanta ku haysa ee DP World.
Isagoo halkiisii sii wata waxuu ka waramay socdaalkiisan inuu u yimi shirar khuseeya Dakadaha Somaliland oo ka dhacay London iyo Dalka Jarmalka, Waxuuna ka war bixiyey intii uu hayay xilka Maareeyaha Dekadaha Somaliland
iyo wixii u qabsoomay waxaanu u dhignaa hadalkiisu sidan:
•Inuu ka midha dhaliyey khilaafkii ka jirey Dekeda Berbera islamarkaana wuxuu is waafajieyey shirkada DPW iyo shaqaalaha Dekeda.
•Waxay isla qaateen in shirkada DP World ay tababaro siiso shaqaalaha Dekeda, isla markaana ay bixiso mushahar fiican.
•Waxaanay soo afjareen khalaafkii u dhaxeeyey tijaarta Somaliland iyo Shirkada DPW.
•Waxaanay xadideen in shirkada DPW ayna ku xad gudbin degaanka ku hareeraysan Berbera iyo nawaaxigeeda.
•Waxuuna ku soo kordhiyey Dekeda dhismayaal cususb oo loo dhisay.
•Wuxuu sameeyey maamul cusub oo khibrad u leh shaqadooda.
•Wuxuu ka qayb qaatey habka balaadhinta Dekeda iyo qurxinteeda.
•Wuxuu sameeyey nidaam iyo kala horeynsiin allaabaha soo degaya iyo kuwa dhoofaya.
•Wuxuu sameeyey in dekadu u adeegto bulshada isticmaasha sida ugu fiican ee ugu hufan.
•Wuxuu dekeda Berbera ku soo kordhiyey Taag cusub iyo Wiishash casriya.
War bixintaa ka dib Maareeyaha waxa la weydiiyay su’aalo la xidhiidha, Dakadaha Somaliland, Waxaanu ugaga jawaabay si waafiya oo qancisay dadwayanahii joogay madashaas. Ugu danbaytii Maareeyahu wuxuu u mahadnaqay sida diiran ee ay u soo dhaweysey Jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan Magaalada Birmingham iyo Dadkii soo abaabulay madashan. Waxayna ku soo dhamaatay jawi farxadleh.
Previous articleSAWIRO-Gudoonka Hayada Shaqaalaha Qaranka Oo Tababar Usoo Gunaanaday 90 Hablood Oo Hargaysa Ku Sugnaa
Next articleMuuqaal-Agaasimaha Waaxda Hantida ee Wasaarada Waxbarashada Iyo Wefti uu Hogaaminayo oo Badhan Gaadhsiiyay Buugtii Manhajka Wasaarada Iyo Bulshada Oo soo Dhoweysay